समाचार - किन भल्भ कभर गस्केट तेलको चुहावट हुनेछ?
धेरै पटक ईन्जिन चुहावट अपरिहार्य हुन्छ, विशेष गरी यदि तपाईं नराम्रो तेल प्रयोग गर्नुहुन्छ, तेलमा धेरै अशुद्धताहरू छन्, केवल यसले मात्र इन्जिनमा लगाउने र फाल्ने काम गर्दैन,
यसले इन्जिनको तेल चुहावट पनि निम्त्याउन सक्छ।
भल्भ च्याम्बर कभरमा केहि चुहावटहरूको बारेमा छलफल गरौं।
कुन कारणले भल्भ चेम्बर चुहावट हुन्छ? यसलाई कसरी व्यवहार गर्ने?
ईन्जिन भल्भ कभर गस्केट भनेको के हो?
ईन्जिन भल्भ कभर गस्केट- बस भल्भ चेम्बर कभरको रूपमा चिनिन्छ। यो ईन्जिनको माथिल्लो भागको सिलि member्ग सदस्य हो। यो तेल प्यान अनुरूप ईन्जिन तेल संग छाप गरिएको छ ताकि ईन्जिन चल्दा तेल बाहिर लीक हुँदैन। सिलिन्डर शरीर अनुरूप सिलिन्डर हेड, सिलेण्डर टाउको मा सम्बन्धित भल्भ स्थापित छ, र सिलिन्डर शरीर छ एक सिल गरिएको कम्प्रेसन कक्षमा गठन गरियो, केही सर्तहरू अन्तर्गत दहनशील मिश्रणलाई यसको भित्री भागमा जलाउन अनुमति दिदै। शीर्ष भल्भ कक्ष कभर, तल सिलिन्डर कभर, तल सिलिन्डर शरीर, र तलको तेल समुप।
किन भल्भ कभर गस्केटविल तेल रिसाव हुनेछ?
१- तेलको चुहावटमा भल्भको कवर ग्यास्केटलेडहरूको बुढाई।
पहिले, भल्भ चेम्बर ग्यासकेट लामो समयको लागि प्रयोग गरिएको छ, जसमा वृद्ध र तेल चुहावट सील गर्ने क्षमता गुमाउँदै छ। रबर सामग्रीको लागि उत्साहजनक ग्यास्केट, वाहन सेवा जीवनको कारण धेरै लामो छ, रबर सामग्री उमेर हुन्छ, कडा हुन्छ, परिणामस्वरूप तेल चुहावट मा।
भल्भ कक्ष इञ्जिनको माथिल्लो भागमा अवस्थित भएकोले, भल्भ चेम्बर प्याड चुहावट पछि सिलिन्डर टाउको तल तेल बग्नेछ किनभने इन्जिनको शरीरले काम गरिरहेको छ।
उच्च तापक्रममा, शरीरको सतहमा समेटिएको तेल बिस्तारै वाष्पीकरण हुन्छ र तीब्र धुवाँ उत्पादन गर्दछ।
यस अवस्थामा, केवल भल्भ चेम्बर कभर खोल्नुहोस् र गैसकेट प्रतिस्थापन गर्नुहोस्। ओल्भ कभर गस्केट्रेप्लेसमेन्ट लागत अधिक छैन।
२- जबरजस्ती क्र्यान्केस भेन्टिलेसन भल्भ रोकिएको छ
क्र्यान्केस भेन्टिलेसन प्रणालीको पीसीभी भल्भ अवरुद्ध छ, जसले मेशिन भित्र अत्यधिक दबाब दिन्छ र अन्ततः दबाबमा तेल रिसाव निम्त्याउँछ। यदि यो गल्ती पत्ता लागेन भने यसले पछि अधिक समस्या उत्पन्न गर्दछ, जस्तै क्र्यान्कशाफ्ट तेल सील चुहावट र यस्तै। यो पीसीभी भल्भले सामान्य रूपमा कार्य गरिरहेको छ कि छैन भनेर निर्धारण गर्न धेरै सरल छ: बेकार परिस्थितिमा, PCV भल्भको कार्य स्थिति तुरून्त तपाईको औंलाले क्र्यान्केस ईन्लेटको खाली ठाउँको परीक्षण गरेर निर्धारित गर्न सकिन्छ।
क्र्यान्केस जबरजस्ती भेन्टिलेसन सिस्टमको पीसीभी भल्भको लागि निरीक्षण विधि:
इञ्जिन निष्क्रिय गर्नुहोस्, सिलिन्डर कभरको नलीबाट पीसीभी भल्भ हटाउनुहोस्, र पीसीभी भल्भ ब्लक भएको छ कि छैन जाँच्नुहोस्। यदि तपाईंले पीसीभी भल्भ संयुक्तमा आफ्नो हात राख्नुभयो भने, तपाईंको औंलाहरूले कडा शून्य महसुस गर्नेछन्।
अर्को निरीक्षण विधि भनेको पीसीभी भल्भ स्थापना गरेपछि एयर फिल्टरबाट क्र्यान्केस इनलेट पाइप हटाउनु हो, र क्र्यान्केस बिस्तारै टिश्यु पेपरको एक टुक्राले छोप्नु हो। जब क्र्यान्केसमा दबाब घट्छ (आईएमआईएनको बारेमा), यो स्पष्ट हुनुपर्दछ कि टिश्यु पेपर पाइप खोल्नेतिर तानिएको छ। थप रूपमा, ईन्जिन रोकेपछि, पीसीभी भल्भ हटाउनुहोस् र यसलाई हातले जाँच गर्नुहोस्। यदि त्यहाँ "क्लिक" आवाज छ भने, PCV भल्भ लचिलो र उपलब्ध छ।
- ईन्जिनको अन्य भागहरूको विफलता तेल लीकेज हुन्छ.
ईन्जिनको पिस्टन घण्टीको बुढोपन ढुकढुल्दो सील गर्न जान्छ। जब इञ्जिन उच्च गतिमा चल्दछ, सिलिन्डर बोबिंगको घटना देखा पर्दछ, जसले अत्यधिक निकास ग्यासको चापलाई निम्त्याउँछ, र गम्भीर अवस्थामा यसले प्रत्यक्ष रूपमा भल्भ कभर गस्केटसेटलेन्ट र तेल चुहावटको क्षति निम्त्याउँछ।
थप रूपमा, तेलको कमजोर गुणस्तरको कारण, पिस्टन आसंजनको गम्भीर कार्बन सulation्ग्रहका कारण, रबर भल्भ ग्याकेटको स्थापना मानक छैन, परिणामस्वरूप असमान बल इत्यादि। यी सबै समस्याहरूले भल्भ कभर गस्केटैंड तेल चुहावटको क्षति निम्त्याउँदछ।
रबर कभर गस्केटको चुहावटको क्षति
भल्भ कभर गस्केटो तेल चुहावटको कारणलाई ध्यान दिनुहोस् ।इन्जिन इन्जिन गर्नुहोस्।
त्यहाँ सम्भावित सुरक्षा जोखिम छ जस्तो भल्भकभर ग्याकेटमा तेल चुहावटले गर्दा आएको हो।
भल्भ चेम्बरको कभरमा तेल चुहावटको कारण, तेल रिसाव इंजिनको बडीमा बग्नेछ। इन्जिनको शरीरको उच्च तापमानको कारण जब ईन्जिनले काम गरिरहेको छ, तेल इञ्जिनको सतहमा टाँसिएको बिस्तारै वाष्पीकरण हुन्छ र कठोर गन्ध उत्पादन गर्दछ। गम्भीर अवस्थाहरूमा, तेलले वातानुकूलन प्रणालीसँगै कारमा प्रवेश गर्दछ, कारको वातावरणलाई असर गर्ने।
दोस्रो, जब भल्भ चेंबर कभरले लीक गर्ने तेल इन्धनको एक्निभस्ट मनिफोल्डमा गुम्छ, तब नोक्सान यति साधारण हुँदैन, चर्को स्वाद हुन्छ, तातो गर्मीमा उच्च वेगमा गाडी, किनभने एक्जस्ट मनिफोल्डको तापमान धेरै उच्च हुन्छ, आसंजनको कारण निकास मैनिफोल्ड तेल दहनमा, इग्निशन अन्य ज्वलनशील कम्पोनेन्टहरू, अन्ततः इन्जिन डिब्बेमा आगो निम्त्याउन सक्छ